Cimilada waxay soo saartaa aaladaha ugu fiican ee bogga internetka ah si ay u tiriyaan xogta internetka
Qaar ka mid ah adeegyada adeega shabakada ayaa caan ku ah isticmaalaha isticmaalkooda sababtoo ah ka bixitaankeeda xogta cajiibka ah ikhtiyaarrada, sifooyinka, iyo guryaha, halka adeegyadu ayan waxba u fiicnayn. Adeegyada adeegga shabakadda ee aan ka wada hadalnay halkan ma aha mid aad u adag, waxayna si sahlan u xoqin karaan goobo iyo barta badan. Waa run in ay jiraan barnaamijyo badan oo la jarayo, laakiin kuwa soo socda ayaa ah kuwo lacag la'aan ah waxayna fulin doonaan shuruudaha ganacsigaaga.
1 - encuadre regla de los tercios. Import.io
Import.io waa adeeg ka saarista xogta webka oo xooggan oo raacaya hababka sahlan ee lagu soo saaro xogta. Tani waxay dhisi kartaa xogtaada shakhsiyadeed ee shakhsi ahaaneed iyo inaad ka soo dejiso xogta hal bog oo websaydka ah. Plus, waxaad kaydin kartaa xogta la rabo ee ku taal qalabkaaga adag, iyo Import.io uma baahnid wax cod ah oo lagu xoqayo bogag badan oo websaydh ah.
Goobta sanduuqa waxaa loogu talagalay adeegyo SEO waxayna bixisaa shirkado iyo shaqaale freelancers oo leh adeegyo isdaba-marida xogta. Si kale haddii loo dhigo, waxaan dhihi karnaa waa labadaba SEO-ga iyo waraaqaha xogta. Intaa waxaa dheer, Scrape Box wuxuu qaban karaa hawlaha la xiriira raadinta mashiinka farsamada, faallaynta faallooyinka, xiriirinta xiriirka, raadinta erayga muhiimka ah iyo bogga bogga.
CloudScrape waa barta shabakada ku salaysan ee shabakada iyo tifaftiraha internetka kaas oo gacan ka geysanaya jarida xog badan oo aan dhibaato lahayn. Waxay na siinaysaa xarun lagu keydiyo xogta ku saabsan barafka kaydka ee kala duwan sida Box.net iyo Google Drive..Waxaad sidoo kale xogtaada ku hayn kartaa qaabka CSV iyo JSON. Waa mid ka mid ah adeegyadda ugu caansan oo dhammaystiran ee shabakadda internetka kaas oo ka caawiya inay ku dhex mari karaan goobaha, buuxiyaan foomamka, dhisto robots iyo soo saartaan xog dhab ah.
TheWebminer waa barnaamij xog-wareysi ah oo internetka ah oo ciriiri ah waxayna u adeegtaa sidii qalabka awood-siinta iyo adeegga la-talinta. Laga soo bilaabo xogta waqtiga-dhabta ah hal site, qalabkan wuxuu ku siinayaa macluumaad sax ah maalin kasta qaabab kala duwan. Waxa kale oo ay nadiifisaa xogta adoo ka tirtiraya nuqulada iyo waxyaabaha aan ku habooneyn, oo ku siinaya natiijooyinka ugu fiican.
Mozenda waa adeeg hagaagsan oo soo-saara bogga internetka iyo qalab wax soo saarka. Waxaa inta badan lagu aqoonsadaa noocyo kala duwan waxayna ku timaadaa dhismaha daruuriga ah ee ku salaysan dariiqa, oo bixisa degsiimaad degdeg ah, sifududeyn habboon iyo si sahlan oo loo heli karo xogo badan oo xog ah. Waxaad diyaarin kartaa faylashaada waxayna ku dhoofin kartaa noocyo kala duwan oo isticmaalaya Mozenda. Barnaamijkan waxaa loo yaqaanaa saxsanaanta wuxuuna u baahan yahay dayactir. Visual Web Ripper
Visual Web Ripper waa xal hal-joojin ah oo ku saabsan xogta webka saarista, iyo goosashada webka. Waa mid ka mid ah shabakadaha ugu xooggan ee xogta shabakadda internetka. Qalabka wuxuu ururiyaa xogta labadaba qoraalka iyo muuqaalka labadaba. Ka dibna wuxuu diyaariyaa xogta ku saleysan shuruudahaaga iyo soo-saarka waxay mar walba qiimo badan yihiin oo faa'iido leh. Webhose
WebHose, oo sidoo kale loo yaqaan Webhose.io, waa shabakad internet oo caan ah iyo barnaamijka isdhexgalka oo si fudud u heli kara xogta dhabta ah iyo hab-nidaamsan. Waxaad raadin kartaa kumanaan goobood iyo ilo internetka ah oo aad ku badbaadin karto waxyaalaha ugu dambeeya in ka badan 200 luuqadood. Waxay kaa caawineysaa inaad daboosho bandhigyo ballaadhan, wargeysyo, blogs, iyo dukaamada internetka.